Maxaa maanta ka dhacay Beledweyne? + Guudlaawe oo ka baaqday (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxaa maanta ka dhacay Beledweyne? + Guudlaawe oo ka baaqday (SAWIRRO)
Maxaa maanta ka dhacay Beledweyne? + Guudlaawe oo ka baaqday (SAWIRRO)
Bannaanbaxyo looga soo horjeedo Maamulka Hirshabelle ayaa maanta ka dhacay Magaalada Beledweyne, iyadoo bannaanbaxayaasha ay xireen wadooyinka.
Bannaanbaxayaasha ayaa la arkaayay iyagoo taayaro gubaaya. Qaarkood oo Warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaanay magaalada u ogolaan doonin inuu yimaado Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle.
Bannaanbaxayaasha ayaa sidoo kale ka horyimid weerar la sheegay in Ciidamada Dowladda, ay saakay ku qaadeen nin Korneyl ah, oo abaabul ciidan ka wada deegaanka Ceelgaal, oo u dhow Magaalada Beledweyne. Labada dhinac ayaa la soo sheegaya in ay is horfadhiyan.
Ciidamada Booliska iyo kuwa Xoogga Dalka oo lagu daadiyay Magaalada Beledweyne ayaa xoog ku kala eryay bannaanbaxayaashii isugu soo baxay wadooyinka magaalada.
Dhanka kale Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), Madaxweynaha Hirshabelle ayaa baajiyay safar lagu waday inuu maanta ku taggo magaaladaasi. Cali Guudlaawe waxaa suurtagal ah in maalmaha soo socdo uu gaaro Beledweyne.
Madaxweyne Kuxigeenka Hirshabelle, Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) oo ku sugan Magaalada Beledweyne ayaa si indho la’aan ah u beeniyay bannaanbaxyadii rabshadaha watay, ee maanta ka dhacay magaaladaasi.
Yuusuf Dabageed oo la hadlay BBC ayaa sheegay inaanay jirin wax haba yaraatee ka dhacay Xarunta Gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Muuqaalada rabshadaha muujinaya ee halkaasi laga soo qaadayna wuxuu ku sheegay dagaalka ka socda Gobolka Tigreyga ee Waqooyiga Itoobiya.
Previous articleRooble oo kulan deg deg ah isugu yeeray laamaha ammaanka (SAWIRRO)
Next articleAbiy Ahmed oo ku dhawaaqay in la qabtay Mekelle